यस्तो छ चाडपर्वमा इटहरीको सुरक्षा योजना !! - Saptakoshionline
यस्तो छ चाडपर्वमा इटहरीको सुरक्षा योजना !!
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १३, २०७५ समय: १२:०९:२६
इटहरी । आउदै गरेको विभिन्न चाडपर्व तथा रथ यात्रालाई मध्यनजर गरी नागरिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले १० वटा सुरक्षा योजना सार्वजनिक गदै चाडपर्वमा सर्वसाधरणलाई होसियारी अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
जसमा भजन, किर्तन, पुजा, आराधाना र रथ यात्राको समयमा बहुमुल्य धातु गरगहना, नगद र मंहगो मोबाईल नबोक्न आग्रह गरेको छ । साथै तिज जस्ता पर्वहरुमा सुन तथा बहुमुल्य सामाग्री लिएर भिडभाड जन्य स्थानमा नबस्न र होसियारी अपनाउन जानकारी सहित आग्रह गरेको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी भिडभाडमा नजान तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरुसँग टाढा रहन पनि आग्रह गरिएको छ । साथै अपरिचित व्यक्तिले दिएको प्रसाद, पानी, बिस्कुट, चकलेट, फलफुल लगायत कुनै पनि चिज नखान उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले शरिर या कपडामा दिशा, फोहोर, आदी लागेको छ भनेमा वा सहयोग गर्न खोजेमा कतै त्यस्ता व्यक्तिले लुट्ने वा चोर्न खोजिरहेको त छैन भनी शंका लागे तत्कालै प्रहरीकहाँ पुग्ने वा खबर गर्न आग्रह गरिएको छ । पछिल्लो समय शरिरमा काउछो, खोर्सानी लगायत चिलाउने, पोल्ने चिजहरु प्रयोग गरि लट्ने गरेका घटना देखिएको भन्दै त्यस्तो भए पहिले आफ्नो समानको सुरक्षा गर्न भनिएको छ ।
कसैले डलर, भारुको बिटा वा सुनको टिल देखाई फाईदा हुन्छ वा सहयोग भनि आफ्नो गहना मागेमा लोभमा नपर्ने पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै घर बाहिर जादा गहना, नगद तथा बहुमुल्य समान चोरले अनुमान गर्न नसक्ने स्थानमा मात्र राख्ने र घर, पसल वा उघोगहरुमा सिसिटिभी, साईरन लगायतका सुरक्षा संयन्त्र तथा प्रबिधिहरु प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कुनै पनि चोरी, लुटपाट, ठगी वा अपराधिक कार्य हुन लागेमा, भएमा वा शंकास्पद व्यक्तिहरुको भिड वा समुह देखेमा तुरुन्त प्रहरीलाई फोन नं. १०० वा ९८५२०९०१२२ नंम्बरमा सुचना दिन इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले सर्वसाधरणमा आग्रह गरेको हो ।